Iyo bitcoin inogona kuve yepamutemo nyoro muEl Salvador | Kubva kuLinux
Pamusangano weBitcoin 2021, Mutungamiri weSalvador Nayib Bukele akazivisa kuti ari kugadzirira kutumira bhiri kuCongress izvo zvichaita Bitcoin mari yepamutemo munyika. Kana bhiri iri rikapasiswa, nyika ichave nyika yekutanga kutora Bitcoin seyepamutemo thenda.
El Salvador iri kutsvaga kuunza mutemo zviite nyika yekutanga kuzvitonga pasi rose kutora bitcoin sedare repamutemo, padivi nedhora reUS. Bukele akataura nezve mukana wemari yedhijitari kuitira kuti vanyanyisa veSalvador vawane mukana wezvemari, vabatsire maSalvadoran anogara kunze kwenyika kutumira mari kudzimba, uye nekugonesa mabasa.
"Svondo rinouya, ndichatumira bhiri kuCongress rinozoita Bitcoin zviri pamutemo tender," Bukele akadaro muvhidhiyo yakatumirwa kumusangano weBitcoin. Vaongorori vanoti Bukele, anemakore makumi matatu nemapfumbamwe anemapapiro kurudyi akauya pachigaro mu39, ane huwandu hwakawanda hwezvigaro makumi mashanu nezvitanhatu kubva makumi masere nezvina kubva pakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemitemo munaKurume apfuura. Izvi zvinoreva kuti bhiri iri rinogona kupfuura.
Mutungamiri weSalvador anogutsikana yekugadzira bitcoin zviri pamutemo tenderl ndichagadzirisa matambudziko ehupfumi pamwe nemagariro enyika.
Sekureva kwenhoroondo idzi, nekushandisa Bitcoin, mari inogamuchirwa neinopfuura miriyoni yemhuri dzinotambira mari shoma ichawedzera nemabhiriyoni emadhora akaenzana gore rega rega. Ino haisi nguva yekutanga kuti El Salvador itange bitcoin. MunaKurume, Strike yakatanga yero yekubhadhara nharembozha ipapo, iyo yakakurumidza kuve yakanyanya kudhanilodha app munyika.
Nguva Bukele anofara nezvechirongwa chake, vamwe vari kunetsekana nezvinhu zvakaita sekushomeka kwechinhu uye kukanganiswa kwazvinogona kukonzera muhurongwa hwemari wanhasi. Muchokwadi, kunyangwe mabhanga epakati penyika akatarisana ne bitcoin nekukwezva, ivo pakutanga vaizeza kumbundira cryptocurrencies nekuda kwekunyanyisa kwavo kusagadzikana. Bitcoin, semuenzaniso, yakarasikirwa neinopfuura hafu kukosha kwayo pakutanga kwegore, mushure mekurova rekodhi yakakwira inodarika $ 60,000. Mamwe ma cryptocurrencies, ayo asingawanzo kutengeswa, akatonyanya kushanduka, kukwira nekudzika kunge masawoni.
Izvi zvinowanzoitika zvichibva pakufungidzira kana meme tweets kubva kuna Tesla CEO Elon Musk. Makomendi ako anobatsira zvakanyanya kukosha kwemari idzi. Nekudaro, kukwira kwekuzivikanwa kwemakristpto mari kwakatungamira iyo US Federal Reserve kuve inofarira kwazvo muganho wedhora rechinyakare, kunyanya kana zvasvika pakubhadhara uye kuwedzerwa kwemari kunogona kutora mazuva akati wandei. Kutengeserana kweBitcoin kunoitika kanenge pakarepo. Cryptocurrencies haidi account yebhangi futi. Ivo vanochengetwa mumadhigidhi wallets.
Ichi inogona kubatsira vanhu vanobva munharaunda dzine hurombo, sevakawanda muEl Salvador, asiwo kunharaunda dzevashoma munyika dzepasirese, kuti vawane zvirinani mari yavo. Lael Brainard, nhengo yeDare reMagavhuna eUS Federal Reserve, akatsigira mwedzi wapfuura mari yakachengetedzeka yedhijitari, inotsigirwa nebhanga repakati, iro rinogona kugadzira hurongwa hwekubhadhara hwakawandisa uye kuwedzera mabasa emari kuvaAmerica. echinyakare mabhangi. China iri kutoedza iyo mari.
Muna Chivabvu, Sachigaro weFederal Reserve Jerome Powell akazivisa kuti bhanga repakati richaburitsa gwaro chirimo chino en kutsanangura kufunga kwebhodhi pamusoro pezvakanaka uye njodzi zvine chekuita nedigital US dhora.
Kunyangwe mari yemadhora senge bitcoin iri yedhijitari, mari yepakati pebhangi yedigital yaizove yakatosiyana neyemadhora emazuva ano, sezvo ichiri kungodzorwa nebhangi repakati kwete padandemutande remakomputa. Kunyangwe kusagadzikana dzimwe nguva kungave mukana, kushandiswa kwesimba kunogara kuri nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Bitcoin inogona kuve yepamutemo nyoro muEl Salvador
TOS-P1: Kuongorora yakakura uye iri kukura Tencent Vhura Sosi - Chikamu 1